Frenkie de Jong oo ka warbixiyay doorka uu ku leeyahay Lionel Messi horumarkiisa xilligan – Gool FM
Frenkie de Jong oo ka warbixiyay doorka uu ku leeyahay Lionel Messi horumarkiisa xilligan
Dajiye June 7, 2020
(Barcelona) 07 Juun 2020. Xiddiga qadka dhexe kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Holland ee Frenkie de Jong ayaa ka warbixiyay doorka uu ku leeyahay saaxiibkiis Lionel Messi horumarkiisa xilligan.
Frenkie de Jong ayaa kaga soo biiray Barcelona kooxda reer Holland ee Ajax, si uu u buuxiyo qadka dhexe ee naadiga Blaugrana, laakiin ma uusan soo bandhigin qaab ciyaareedkii laga rabay xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay ee garoonka Camp Nou.
Wargeykska “Sport” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday warysi uu bixiyay Frenkie de Jong waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Marka uu Lionel Messi kula hadlayo oo uu ku siinayo talo, waxaad ogaan doontaa inaan hor joogto xiddiga adduunka ugu fiican, marka uu kula hadlayo wuxuu kugula talinayaa inaad si taxaddar leh isaga u dhageysato”.
“Waxaa jiro waxyaabo iyo faahfaahino yar, laakiin mar walba waxay sameynayaan isbadel, Messi mar walba wuxuu jecelyahay inuu wax caawiyo oo uu gacan qabasho sameeyo”.
“Waxaan gaadhay riyadaydii ahayd inaan u ciyaaro kooxda Barcelona, waa kooxda aan jeclaaday tan iyo markii aan yaraa, waxay aheyd kooxda kaliya ee aan ka taageero meel ka baxsan dalka Holland”.
Tababare Quique Setién oo ka hadlay xaalada soo kabasho ee Luis Suarez, kaddib dhaawacii soo gaaray